Uchungechunge mayelana abameli kanye abaphenyi ziye kwakuqala ukwanda emuva phakathi nekhulu leminyaka elidlule, kusukela isidingo kubo kuyaqhubeka. Lezi ubuchwepheshe baye amashumi eminyaka ibe namaqhawe hhayi kuphela abaphenyi, kodwa futhi idrama, isenzo, amahlaya, okuvusa usinga. Kuyini amaphrojekthi elithakazelisayo TV kufanele sinake izilaleli?
Uchungechunge mayelana abameli: zakudala
"Perri Meyson" - iphrojekthi TV mayelana ebukekayo, wasisebenzisa kahle futhi ngokwethembeka ummeli, eyakhishwa ngo-1957. Umdlali oyinhloko, ogama image emelela Raymond Burr, wajabula ngakho nezethameli ukuthi umbukiso eyathatha 9 zonyaka. Kukholakala ukuthi le "insipho opera" iye yabangela ukufuneka ye-TV mayelana abameli, okuyinto kuyaqhubeka kuze kube yilolu suku.
"Perri Meyson" - iphrojekthi ye-TV, umlingisi emaphakathi ngubani uchwepheshe ummeli Perry, nomsizi wakhe, uDetective Della noPawulu. Ngo isiqephu ngasinye trio kwemukelwe uphenyo amacala amasha, isephulamthetho sinquma, athole izaba abangenacala. Fans of the show balinganisela ukuthi ubugebengu abaningi bahluleka ukuchaza balingisi labagcamile 9 zonyaka. Kwavela ukuthi ngemva kwabo amacala angaphezu kuka-300.
"Kungcono Call uSawule"
Yiqiniso, azinake lwezibukeli, uchungechunge ayigcinanga ngokuchaza ukuthi abameli eziye zabona ukukhanya kwekhulu leminyaka elidlule. project empeleni esasisesisha TV, okwamanje ehlanganisa zonyaka ezimbili - "Kungcono Call uSawule". I protagonist sombukiso othakazelisayo - ". Breaking Bad" ummeli Sol Gudman, ngubani ukhunjulwa bonke abalandeli sehlelo TV ewuchungechunge
TV iphrojekthi "Kungcono Call uSawule" uhlobo prequel uchungechunge mayelana misadventures ka Walter White UYese Pinkman. Izibukeli uzobona Sola ngesikhathi wayengakalitholi yaphenduka ummeli owaziwa lobugebengu, kuba ukuhamba okulula umthetho. Kulesi iqhawe prequel usenayo igama lakhe langempela (Dzhimmi Makgil), uzama ukuthola indlela ngokwethembeka. Nokho nezilingo baqamekela kuye at zonke sinyathelo.
Izibukeli bayathanda ahlekisayo uchungechunge mayelana abameli oluxube idrama, singakwazi ukuncoma futhi ubonise "force majeure". Isizini yokuqala othakazelisayo TV iphrojekthi wabona ukukhanya ngo-2011, njengamanje linikeza izilaleli 5 zonyaka. The main umlingiswa - onekhono umfundi dropout uMichael, owayebizwa sicashe kusukela abamele emhlabeni lobugebengu ngenxa iqhaza wehlulekile.
Ukuzama ngayo ukuphila kwakho kube ngcono, uMichael ngenkohliso lingena ku interview, elibamba omunye abameli evelele kunazo zonke e-New York. Harvey, ogama isondo boring abathweswe iziqu umthetho, kuthatha Michael ukuba abasizi babo. Yiqiniso, abameli abasha kuyobe kukuningi okumelwe zikufunde kumuntu omdala. Isimo nzima ukungenela Harvey nozakwethu abahlose ukuqeda umsizi wakhe.
Kuyinto imfihlo ukuthi abameli abathembekile futhi ehloniphekile njalo crystal. Nakulokhu futhi, qiniseka ukuthi izilaleli kuyokusiza Alan Shore - protagonist yochungechunge ethandwa "Boston Yomthetho", ehlanganisa 5 zonyaka. A brilliant ummeli lobugebengu Alan ephelelwa umsebenzi wakhe, lokho kumenza abe ilungu inkampani ehlonishwa, ukusebenza lezindaba zomphakathi.
Alan abatelekile nozakwethu ezintsha, kusukela onakala ukunqoba emacaleni esingenathemba kulahliwe lonke. Nokho, izindlela kwentiwa emsebenzini wabo ummeli abakhaliphile ekude kakhulu ehlanzekile. Impumelelo njalo Ubangela umona, ngesikhathi Shore livela esiyingozi - uzakwabo Brad. Nokho, u-Alan, ngomumo ukuba afinyelele imigomo ngakulahla nganoma iyiphi indlela, kunzima kakhulu ukubamba ephula umthetho, e ukuthi yini eyayizokwenzeka maduze qiniseka isitha sakhe.
"Umfazi Esifanele '- a chungechunge oluthakazelisayo, uhlamvu kabani esimaphakathi ummeli wesifazane. Isizini yokuqala umbukiso iye wethulwa emphakathini ngo-2008, njengamanje iphrojekthi TV siqukethe 6 zonyaka. The main umlingiswa - Alicia Florrick, owashiya umsebenzi wakhe ngenxa umndeni. Esikhathini isiqephu sokuqala ababukeli uyibona indima wekhaya, nonina nomkakhe ayengaphansi ummeli wesifunda.
ukuphila Alicia ekushintsha kakhulu lapho umyeni wakhe zibeke ukumangalela okungamanga futhi waboshwa. Umkhaya othile ulahlekelwa umondli, ngakho lo msebenzi uphoqelekile ukuba zilawule uNkk Florrick. Alicia kabusha wahlela ihhovisi umthetho, amshiya eminyakeni eminingi edlule. Izibukeli ababona umbukiso "unkosikazi Lungisa", ungakwazi ukuthola uma umlingiswa oyinhloko uzokwazi aphumelele nokusiza umyeni wakhe.
Qiniseka ukuthi ubona futhi kujabulise ithelevishini iphrojekthi "Elli Makbil", ehlanganisa 5 zonyaka. Uhlamvu main ekhetha ubungcweti ummeli, abafisa ukufunda kanye izinsizwa naye othanda. Nokho, owayekhethwe kancane kancane ilahlekelwa isithakazelo Ellie, ibhidliza naye. Eminyakeni embalwa kamuva, Miss McBeal, iye kwadingeka isikhathi uthole degree umthetho, ihlangana bangaphambili ayefunda naye esikoleni. Owesilisa ezama bamcela ukuba uthole umsebenzi ehhovisi lakhe, kodwa kulokhu kuyoba uzakwabo Ally ex-isoka owayesevele washada.
amaphrojekthi abathandwayo 80-90
Uchungechunge lwezihloko ezithi "Kwenzeni umkhuba" yabhalwa ngo-1997. Bonisa, kanye iwine ezinkulungwane zabalandeli, yathatha kakhulu ngendlela 8 zonyaka. Le TV iphrojekthi kuqhathaniswa ubudala, uchungechunge lokugcina eyakhishwa ngo-2004, kuyinto ephawulekayo ngenxa yokuthi kwendaba elithakazelisayo, waphonsa kakhulu.
The main umlingiswa - indoda okuthiwa Bobby Donnelly, inhloko ifemu yomthetho. inkampani lakhe lunye engavamile kakhulu, amakhasimende abantu abaye wenza lobu bugebengu ezimbi kakhulu. Bobby nabasizi bakhe, ngamunye chungechunge ziye ukulwa elonakele uhlelo lwezobulungiswa sikunqobe yokungathembeki ummeli wesifunda.
Hhayi uchungechunge kuphela "I Practice" zizokhanga ezibukelini uthanda amaphrojekthi ubudala ithelevishini. Ngo-1986 wabona ukukhululwa kwesizini lokuqala show "LA Law", uchungechunge siqukethe 8 zonyaka. Izibukeli bamenyiwe komunye uchungechunge ukubukela ukuphila okuthakazelisayo abakhileyo ifemu yomthetho.
Ukunqoba noma Ukufa
Uchungechunge oluthi "Fight", eyakhishwa ngo-2007, ntu bakhangwa umlando we Ezingakanqotshwa abesifazane abameli. Patti Hyuz - owesifazane eqinile, uyaqiniseka ukuthi umgomo bungatholakala, unganqikazi ekukhetheni izindlela. Inkinobho ye Iron Lady, ogama indima lolungenamaphutsa eyadlalwa Glenn Klouz, unezinhloso ezinkulu, ngomumo ukuba zihlanganyele empini nge abayiziqumama enethonya nabezombusazwe.
Uchungechunge oluthi "Fight" inikeza ababukeli bajwayelane umlando abavamile intombazane Ellen, ngubani ukudalelwa baba umsizi Patti. Ellen ngokushesha ukuze kubonwe yokuthi uNkk Hughes endleleni nomgomo walo nabakhi bezindawo abanaki imithelela lutho. Ukuphila abasizi womkhaya osemncane ngenxa izenzo ubasi wakhe usengozini.
abadala kuphela, kodwa ngokuvamile kudingeka ngosizo ummeli onekhono, lokho kuzokwenza yilowo nalowo obona uchungechunge "Umdlali wasemuva". Indima ungumsindisi izingane ezimpofu ngenkani of izimo livele libe Insizwa okuthiwa Nick. Njengoba indodana ummeli yimpumelelo, umuntu wayengenza uphumelele ekhungathekisayo, kodwa umsebenzi wakhe liyawa ngobusuku obubodwa ngenxa ezinye izinkinga umthetho.
Ekuqaleni, Nick uyavuma ukwenza njenge welungelo izingane ompofu yithemba, akholelwe yinto entsha umsebenzi udumo unpromising, benethemba lokuthola kwenye indawo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Nokho, kancane kancane, le nsizwa benamandla uzwela abantu ngosizi lwezilwane amacala abo kancane. Uchungechunge oluthi "Umdlali wasemuva" kuzovumela izibukeli zibukele njengoba ummeli baphikise kancane kancane iphenduka ibe iqhawe yizicukuthwane abazidelayo ukuvikela izithakazelo izingane engenamsebenzi.
Bonisa nge Bryusom Uillisom
Kuyinto imfihlo ukuthi impumelelo umbukiso akuxhomekile nje kuphela esimweni ngesakhiwo, kodwa futhi on ukhonkolo. "Detective Agency" Moonlight "" - iphrojekthi ye-TV, lapho izindima eziyinhloko eyadlalwa izinkanyezi ezifana Bryus Uillis, Sibill Shepard, Ellis Bisli. Uchungechunge lokuqala show othakazelisayo wafika ngo-1985, ochungechungeni siqukethe zonyaka ezinhlanu.
Maddie - yimpumelelo ubuhle imodeli, yazibiza sibonga zwe commercial imoto. Uma intombazane engalali yokuziphilisa, ngemali yayo ukuphunyuka control. Ngezinye Maddie kuyinto izinkampani yimali ambalwa nje, phakathi lapho kukhona ejensi umphenyi. Okokuqala, imodeli phezulu uhlose ukudayisa, kodwa ngasese umphenyi ejensi uDavide engenza ukuthi enze esinye isinqumo. Ngenxa yalokho, i-imodeli futhi umseshi ozakwethu alinganayo enilindé uphenyo okuthakazelisayo. Ngokuvamile izibukeli ezimi ukubukela "Detective Agency" Moonlight "," funda aphumelele abalingani souped ukulondoloza Isikhundla sakhe ukuwa.
Akukhona nje amaphrojekthi TV aseMelika azinake eduze lababukeli. "Ummeli" - uchungechunge, wathwebula eRussia, isizini yokuqala esanyatheliswa ngo-2004. Kudlala ku show, eyathatha 8 zonyaka, wathola ezinjengalezi abadlali emangalisayo njengoba Andrei Sokolov futhi Tatiana Cherkasova.
Yurist Aleksey ngokuphelele hhayi efana namanye amalungu emkhakheni wabo. Iminyaka Engu-umkhuba ungazange zasiza indoda uthole ezifana izinga ewusizo njengoba isimo sokugxeka. Alex ilungele ibheyili aphume nesimo esinzima, wonke umuntu efinyelela ke. Ukusiza abantu, wayevame has a khulula, wamshaya wonke amabutho akhe ukuze alwe nokungabi nabulungisa. "Ummeli" - uchungechunge, okuyinto ngokoqobo kunzima ukufaka phansi. Lokhu izilaleli uzokwazi ukubona ngayo uchungechunge lakho lokuqala kakhulu.
Yini ama-movie ukuze ubone
Akubona bonke abantu isikhathi ukubukela izinhlelo ze-TV mayelana abameli, abalwe kulesi sihloko. Kulokhu, kufanele banike okuthandayo kumuntu amafilimu emangalisayo ukuthi baxoxe ngezinkinga ngomsebenzi. Isibonelo zakudala - "Ummeli kaDeveli, 'Starring ifilimu got ezinjengalezi abadlali emangalisayo njengoba Al Pacino futhi Kianu Rivz. I protagonist - ummeli abasha ekungabazeni izisusa zabanye, ukulungele ukuyikhipha ekuxhakathisweni ubulungisa ngisho scoundrels ephelele. Ummeli akuyona yahlulwa iyiphi inqubo, ikhanga isicebi ongaqondakali, amnika umsebenzi ophezulu.
"Okungabekezeleleki Unya" - enye ifilimu emnandi abadlali abanamakhono azosiza kukhanye up kusihlwa. I protagonist comedy romantic - ummeli ovelele, wahlanganyela amacala ezehlukaniso. Endleleni yakhe imele intokazi ebukekayo ngubani uzakwabo. Ukubhekana izinhlamvu kuzoba ashisayo, ikakhulukazi ngemva kokuba ziqhuma imizwa ngomunye nomunye.
"Lesi siprofetho lokugcina St Matrona": sakhiwo le filimu
Meaning, umsebenzi kanye typology kwabaholi bezombangazwe ezweni lanamuhla
Kuyini Izinkuni sika isibani: izinkomba ukusetshenziswa
Ezahlukahlukene ukuziphendukela kwemvelo futhi izinguquko? Ubudlelwane kanye umehluko oyinhloko
Inkukhu e tomato sauce. ukulungiselela ezisheshayo izitsha ezihlwabusayo
Elihlangana Kwe-dielectric Heating egesi. zokuvimbela ingozi